အားလုံးစျေးပေါအားလုံး 50% သို့မဟုတ် 1 + 1, အစားအစာ, ကော်ဖီ, နေရာထိုင်ခင်းအတွက်ကမ်းလှမ်းချက် - allout.cheap - ၅၀% သို့မဟုတ် ၁ + ၁ စားသည် သောက်ပါ | နေ
50% သို့မဟုတ် 1 + 1
ငါတို့အသင်းဝင်များအတွက်စားရန်၊ သကြားလုံးများ၊ ရေခဲမုန့်!
ရန် စားသောက်ဆိုင်များ, pastry ဆိုင်များ…
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းဝင်များအတွက်သောက်စရာ၊ ကော်ဖီ၊ ပုလင်းထဲတွင်!
ကဖေးဘား၊ ကလပ်၊ စားသောက်ဆိုင်၊
အခန်းများ၊ တိုက်ခန်းများ၊ အိမ်များအတွင်း…
50% သို့မဟုတ် 1 + 1 အစားအစာ | သောက်ပါ | နေရာထိုင်ခင်း
အားလုံးထဲကအဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ဖြစ်လာသည်
အခမဲ့ယခု ... ကျွန်တော်တို့ကို Join စျေးပေါတယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ကို download လုပ်ပါ
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်လုပ်ဆောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သင့်ကိုကူညီခြင်းပြုလုပ်သောမိတ်ဆွေတိုင်းအတွက်2သည် 1 လစဉ်ကြေးပေးသွင်းခြင်းဖြင့်ဆုချသည် allout.cheap ပထမအကြိမ်စမ်းသပ်သည့်လအသစ်သို့မဟုတ်စီးပွားရေးအတည်ပြုချက်အပြီးတွင်ကူပွန်ကုဒ်မှတစ်ဆင့် 12,99 €တန်ဖိုး။
အောက်ဖော်ပြပါ link ကိုသူငယ်ချင်းများနှင့်မျှဝေပါ။
ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏စာကိုရေးပြီး Generate ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
သင့်ရဲ့ရည်ညွန်း URL: https://allout.cheap/ကော်ပီကူးဖို့ကိုနှိပ်ပါ
Facebook ကနေတဆင့်ဝေမျှမယ် တွစ်တာမှတဆင့်ဝေမျှမယ် WhatsApp ကိုမှတဆင့်ဝေမျှမယ် Linkedin မှတဆင့်မျှဝေပါ Pinterest မှတဆင့်ဝေမျှမယ် WhatsApp ကိုမှတဆင့်ဝေမျှမယ်
သင်၏နယ်မြေရှိကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း ၀ င်များ၊ အထူးသဖြင့်သင်၏အားလပ်ရက်များနေ့များတွင်ငွေရှာပါ။
အယ်လ် Ampatzoglou 32
တစ်နေ့လုံးကော်ဖီ - စားသောက်ဆိုင်
Juke box ကို
Grand lux တိုက်ခန်း ၈ ယောက်
€ 115 / ည
€ 95 / ည
IOS အသုံးပြုသူများအတွက် "web view app" နည်းပညာအသစ်ကိုအသုံးပြုနေသည်။